सम्पादकीय : निर्वाचनमा केन्द्रित होउँ !
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मौन समर्थनमा सत्तारूढ दलहरूले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गरेसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति देखिएको संशय मेटिएको छ। सरकारले वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन तोकिएकै समय हुने सम्भावना बढेर गएको छ।
संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार आगामी वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदा मुलुकको लोकतन्त्र र संविधान थप सवल हुनेछ। त्यसका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ। २०७३ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गरिएको भए पनि यसपटक एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेर सरकारले निर्वाचनप्रतिको विश्वासनीयता बढाएको छ।
वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्दा असोजसम्म म्याद भएका स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाउने जिकिरसहित सर्वोच्चमा दर्ता भएको निवेदनमाथि अन्यथा फैसला भएन भने अरू कारणले निर्वाचन रोकिने स्थिति छैन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणमाथि महाअभियोग दर्ता भइसकेको परिस्थितिमा सर्वोच्चले पनि सरकारको निर्णयविरूद्ध जानसक्ने स्थिति देखिँदैन। यसरी हेर्दा वैशाख ३० मा निर्वाचन हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो। त्यसमाथि नेपाली जनताको पटकपटकको संघर्षका बलमा हासिल गरिएको यो उपलब्धीको रक्षा गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरूको साझा दायित्व हो। निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न सक्छ र संविधानविरोधी शक्तिहरूलाई संवैधानिक प्रक्रियामा हिँडाउन सक्नेछ।
निर्वाचन हुनेमा अब सायदै शंका रहला। तर, निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने ? कोभिडको प्रकोपका कारण अर्थतन्त्र थलिएको परिस्थितिमा निर्वाचन फारोतिनो बनाउन दलहरूले के भूमिका खेल्न सक्छन् ? निर्वाचनप्रति नागरिक उत्तरदायित्व के रहन्छ ? यस्ता प्रश्नहरू हाम्रा लागि अहम् महत्वका छन्।
निर्वाचनमा जनताका असल प्रतिनिधिहरू आउनसक्ने वातावरण बनाउनु राजनीतिक दल र आम मतदाताको साझा जिम्मेवारी हो। दलहरूले जनताको भावनाअनुरूप असल उम्मेदवारहरू खडा गर्नु र आम मतदाताले विना प्रलोभन वा प्रभाव असल उम्मेदवारलाई जिताएर मात्र जनभावनाको कदर र राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ। तसर्थ, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिक निर्वाचनलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन केन्द्रित हुन जरूरी छ।